Vanofamba ngarava vakafarira kushanyira Jamaica mushure memakore maviri vakamirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Vanofamba ngarava vakafarira kushanyira Jamaica mushure memakore maviri vakamirira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
HM CHIPO - Gurukota rezveKushanya, Hon Edmund Bartlett (kurudyi), anotambira kubva kunaCaptain Isidoro Renda, diki vhezheni yeCarnival Sunrise, yakamira muOcho Rios neMuvhuro, Nyamavhuvhu 16, 2021 nevanhu vanopfuura 3,000 vafambi nevashandi, zvichiratidza kutanga yekufambisa ngarava muJamaica, mushure memwedzi gumi nemisere hiatus nekuda kwedenda reCOVID-17.
"Zvinotyisa chose, ndanga ndakamirira makore maviri izvi," akabvuma Terry Davis apo aiongorora nzvimbo yeJamaican nemumwe wake, Katy Peale uyo akawedzera kuti: "Zvinofadza chaizvo kuva kunze, kufamba, kuona nzvimbo dzakanaka zvakare, kuva pamwe chete neshamwari uye nemhuri; Nakidzwa."
Ichi chaive chekutanga ngarava yekufona pachiteshi chegungwa cheJamaica kubva COVID-19 denda rakarova mwedzi gumi nemana yapfuura.
Vaviri vekutanga kuburuka vaibva kuMiami, Florida, vachiona yavo yekutanga Jamaica cruise.
Chii chavaitarisira? Zvinwiwa! "Ikofi yakanaka kwazvo pasi rose, Blue Mountain," uye "rum punch."
Vaviri ava vaive parwendo rwavo rwekutanga kuenda kuJamaica uye vachinakidzwa nenzvimbo mushure mekuburitsa Carnival Sunrise kuBerth 1 yeOcho Rios Cruise Shipping Port. Yaive yekutanga ngarava yekufona pachiteshi chemuno mumwedzi gumi nemanomwe kubvira pakaitika denda reCIVID-17.
Navo vaive vaviri vekutanga kutsika ivhu reJamaican sechikamu cheCaribbean cruise yavo, vachitangira kuMiami. Donna naAnthony Pioli vekuMiami vaive vakanangana chaizvo nezvavaida zvakanyanya panguva yavo kumahombekombe muOcho Rios, vachimbove kuM Montego Bay kare. Mushure mekumirira kwemwedzi gumi nemanomwe, Anthony aive akatarisira "kofi yakanakisa pasirese, Blue Mountain" uku kuna Donna, "Ndiri kutsvaga rum punch."
Iko kunakidzwa kwakagovaniswa naCarnival Sunrise's Captain Isidoro Renda. "Ini pachangu, vashandi vese neCarnival Cruise Line, tinofara kutanga zvekare uye kuva nerunhare rwekutanga muJamaica, "Akadaro, achinongedzera ku" hukama hwakareba kwazvo neJamaica neOcho Rios, saka tinofara uye tinofara kuva pano. "
Ocho Rios iri pakati pezviteshi zvikuru zveSunrise mushure memwedzi gumi nenomwe "uye tichauya pano kazhinji," akagovana, achiverenga nguva yacho kuva "kanokwana katatu pamwedzi."
Gurukota rezveKushanya, Hon. Edmund Bartlett aive pachiteshi pachiitiko ichi uye kwaari: "Kudzoka kwechikepe panguva ino kunoratidza chikamu chechipiri chakakosha chekuvhurwa kweindasitiri yekushanya uye kuchabatsira zvakanyanya kudzosa mabasa kuindasitiri."
Nehurongwa hwaCarnival hwevamwe vanosvika gumi nematanhatu pamusoro pemwedzi mitatu inotevera uye MSC, Royal Caribbean, Disney uye dzimwe nzira dzekufambisa kugadzirira kutanga kwechikepe kweCaribbean Sea: , "Vakadaro VaBartlett. Akafungidzira angori pasi pe16 cruise vafambi kuenda kuJamaica pakupera kwegore, panguva iyo iwo Montego Bay neFalmouth madoko achagadziriswa zvakare netarisiro yekufona zvakare kuPort Royal nePort Antonio.
Panyaya yekuomerera kumitemo yeCOVID-19, Gurukota Bartlett vakati vachipa zvakatemwa nemasangano ehutano eruzhinji eko neepasi rose: mukusiyana kwehutachiona pachahwo nekuchinja kwaro, uyezve kugadzirisa maitiro, maitiro uye mafungiro. ”
Vatakuri zviuru zvitatu nevashandi veCarnival Sunrise vaifanirwa kusangana nematanho akasimba anotungamira kutanga kwechikepe, zvichida kuti 3,000% vabatwe zvizere uye kuti vese vafambi vape humbowo hwemhedzisiro kubva kuongororo yeCOVID-95 yakatorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekufamba nechikepe. . Panyaya yevasina kuchenesa vafambi, vakadai sevana, PCR bvunzo inosungirwa, uye vese vafambi vanoongororwa uye kuyedzwa (antigen) pakuburuka.
Zvakare, chiteshi chekufona chakasangana nemitemo yakatemwa nebazi rezvehutano nemakambani echikepe, neTurkey Product Development Company (TPDCo) ichiongorora kutevedzera mitemo.
Jamaica yakaverengerwa zvakanyanya nekuda kwekurarama zvinoenderana nezvinotarisirwa. “Ndinoda chaizvo kutora mukana uno kutenda Ministry of Tourism iyo Port Authority yeJamaica, uye zvikuru Ministry of Health; timu yako yese yehutano yanga iri mubishi rekutora ngarava nhasi uye zvave kupfuura zvatinotarisira, "akadaro Marie McKenzie, Mutevedzeri weMutungamiri weCarnival weGlobal Ports neCaribbean Government Relations. Ms McKenzie, anova wekuJamaican, ane mutoro wenyika makumi maviri nenomwe mudunhu iri, uye anga achishanda pamwe nevakuru vemuno mukutangisa patsva kweCarnival.